DJI na-enye ụgbọ mmiri ọhụrụ ya, Mavic Ikuku | Akụkọ akụrụngwa
DJI na-enye ụgbọ mmiri ọhụrụ ya, Mavic Air
Ma ọ bụ na anyị nwere ụbọchị ole na ole na akụkọ banyere ọ ga-ekwe omume na ụlọ ọrụ ahụ ga-eweta ihe ọgbara ọhụrụ nke ọma nke ụdị abụọ drones ikpeazụ ya, Mavic Pro na Spark. N'okwu a nke Mavic Ikuku, na-abịa na ibu ibu, arụmọrụ na igwefoto ọhụụ dị egwu.
Drogbọ mmiri ọhụrụ ahụ ji ike abịa. Enwere ọtụtụ nkọwa ga-eme ka ọ dị elu na tebụl, mana iji gosipụta ụfọdụ n'ime atụmatụ ya anyị ga-ekwu na gimball dị nnọọ ka ụdị Spark, yana 3 axes ma nwee nchebe ka ukwuu iji gbochie mmebi na ihe mberede na kwa igwefoto nwere ike ijide akpaka panoramas na 8K mkpebi ...
Ibu ibu nke drone a bu 430g ma gbakwunye, dika ndi ohuru ohuru nke ulo oru, ihe nkenke na obere ihe, nke mere ya DJI drone nke nwere ihe kachasi nma maka mbufe ya. N'ezie ụdịrị Spark adịbuworị otu n'ime ihe kachasị mma transportable n'ihi nhọrọ mpịachi, ma ihe omuma ohuru a di obere, di egwu.
Ọ bụrụ na anyị elekwasị anya na igwefoto, anyị na-ahụ na ọ na-arịgo ihe mmetụta 12 megapixel nke nwere ike dekọọ vidiyo na 4K / 30p, 2,5K / 60p na 1080 / 120p. Ya mere eji enyere anyi aka nke oma inwetara onyonyo di egwu site na ikuku. Agba ndị dị na-acha ọbara ọbara, ọcha na oji.
Ọhụrụ drone nwere ọnụahịa mmalite nke euro 849, ma dịka ọ dị na ụdị ndị gara aga, onye ọrụ kachasị achọ nwere ike ịhọrọ kit nwere batrị ndị ọzọ - ọkachasị batrị 3 - akpa na-ebu, ndị na-echebe ihe mkpuchi, nkwụnye batrị dị na mpụga na ọdụ ụgbọ mmiri ọzọ. maka euro 1.049. Nke a bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ihe nlereanya anyị na-akwado mgbe niile maka ndị chọrọ n'ezie ịnwe ahụmịhe ụgbọ elu na-enweghị atụ na ụdị ndị ọzọ yiri ya.
Ndoputa malitere taa na DJI weebụsaịtị ma n'ezie ngwaahịa ga-amalite na-ere Jenụwarị 28 na-esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » DJI na-enye ụgbọ mmiri ọhụrụ ya, Mavic Air
Chineke nke agha enweela ụbọchị ntọhapụ maka PlayStation 4
Nespresso ka ọ bụ Dolce Gusto? Kedu ihe bụ ọdịiche na nke kachasị m mma